Instagram မှာ ဘယ်လောက်တောင် အချိန်ဖြုန်းနေလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးသွားတော့မယ်
17 May 2018 . 3:01 PM
Instagram ကို Facebook ထက်တောင် စွဲစွဲမြဲမြဲအသုံးပြုနေတဲ့သူတွေရှိနေတယ်ဆိုရင် Instagram ကနေ အချိန်အကြာကြီးမသုံးစွဲမိအောင် Feature အသစ်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအသစ်ထည့်သွင်းပေးမယ့် Feature ကတော့”Usage Insights” လို့ ခေါ်တဲ့ Feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
It's true. RT @TechCrunch: Code buried in Instagram’s Android app revealsa“Usage Insights” feature that will show users their “time spent” https://t.co/1Lt3DgIFEj
— Kevin S. (@kevin) May 16, 2018
အစတုန်းက အခု Feature ကို App Researcher တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jane Manchun Wong ကနေ Instagram Android App ရဲ့ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ Code ထဲမှာ ထည့်သွင်းထားတာကို တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ အခုအချိန်မှာတော့ Instagram ရဲ့ CEO Kevin Systrom ကနေ အတည်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Kevin ရဲ့ ပြောကြားချက်အရတော့ Instagram ကနေ အကောင်းဘက်ကို ဦးစားပေးပြီး ရည်ရွယ်တဲ့ ကိုယ်ဘယ်လောက်တောင် Instagram မှာ အချိန်ဖြုန်းနေသလဲဆိုတာကို သိနိုင်မယ့် Tool တစ်ခုကို ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Instagram ဟာ ဆိုရင် လက်ရှိအချိန်မှာ အကောင်းဆုံးသော Photo Sharing Social Media Platform တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ Facebook ထက်ဆိုင်ရာ ဓါတ်ပုံကိုပဲ ဦးစားပေးတဲ့အတွက် ဓါတ်ပုံတွေကိုပဲ အဓိကကြည့်ချင်တဲ့သူတွေ၊ Visual ကို အသားပေးပြီး ကြော်ငြာချင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းချင်တွေအတွက်ကတော့ အသုံးအများဆုံး App တစ်ခုဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Instagram က အခုလိုမျိုး သူရဲ့ App မှာ အချိန်ဘယ်လောက်ထိ အသုံးပြုနေသလဲဆိုတာကို ပြန်သိနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နေသလိုပဲ Google ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူရဲ့ Android P Developer Preview မှာ Android OS မှာ ကိုယ်တိုင် ဘယ် App ကို ဘယ်လောက်အသုံးပြုနေသလဲဆိုတာကို ပြန်ကြည့်နိုင်မယ့် Dashboard Feature ကိုထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
Instagram ကို Facebook ထကျတောငျ စှဲစှဲမွဲမွဲအသုံးပွုနတေဲ့သူတှရှေိနတေယျဆိုရငျ Instagram ကနေ အခြိနျအကွာကွီးမသုံးစှဲမိအောငျ Feature အသဈတဈခုကို ထညျ့သှငျးပေးတော့မှာဖွဈပါတယျ။ အခုအသဈထညျ့သှငျးပေးမယျ့ Feature ကတော့”Usage Insights” လို့ ချေါတဲ့ Feature တဈခုဖွဈပါတယျ။
အစတုနျးက အခု Feature ကို App Researcher တဈယောကျဖွဈတဲ့ Jane Manchun Wong ကနေ Instagram Android App ရဲ့ ဖုံးကှယျထားတဲ့ Code ထဲမှာ ထညျ့သှငျးထားတာကို တှရှေိ့ခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ အခုအခြိနျမှာတော့ Instagram ရဲ့ CEO Kevin Systrom ကနေ အတညျပွုပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Kevin ရဲ့ ပွောကွားခကျြအရတော့ Instagram ကနေ အကောငျးဘကျကို ဦးစားပေးပွီး ရညျရှယျတဲ့ ကိုယျဘယျလောကျတောငျ Instagram မှာ အခြိနျဖွုနျးနသေလဲဆိုတာကို သိနိုငျမယျ့ Tool တဈခုကို ဆောငျရှကျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
Instagram ဟာ ဆိုရငျ လကျရှိအခြိနျမှာ အကောငျးဆုံးသော Photo Sharing Social Media Platform တဈခုဖွဈပွီးတော့ Facebook ထကျဆိုငျရာ ဓါတျပုံကိုပဲ ဦးစားပေးတဲ့အတှကျ ဓါတျပုံတှကေိုပဲ အဓိကကွညျ့ခငျြတဲ့သူတှေ၊ Visual ကို အသားပေးပွီး ကွျောငွာခငျြတဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးခငျြတှအေတှကျကတော့ အသုံးအမြားဆုံး App တဈခုဖွဈနတောပဲဖွဈပါတယျ။
Instagram က အခုလိုမြိုး သူရဲ့ App မှာ အခြိနျဘယျလောကျထိ အသုံးပွုနသေလဲဆိုတာကို ပွနျသိနိုငျအောငျဆောငျရှကျနသေလိုပဲ Google ကိုယျတိုငျကလညျး သူရဲ့ Android P Developer Preview မှာ Android OS မှာ ကိုယျတိုငျ ဘယျ App ကို ဘယျလောကျအသုံးပွုနသေလဲဆိုတာကို ပွနျကွညျ့နိုငျမယျ့ Dashboard Feature ကိုထညျ့သှငျးပေးခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
by 2B . 16 hours ago